Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo sheegay inuu dhamaaday wakhtigii Imaaraadku ciidamadda Soomaaliya mushahar siin lahaayeen, ayna kala wareegi doonaan. – Madal Furan
Hoy > Warka > Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo sheegay inuu dhamaaday wakhtigii Imaaraadku ciidamadda Soomaaliya mushahar siin lahaayeen, ayna kala wareegi doonaan.
Muqdisho (Madal Furan) – Wararka laga helayo magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan uu ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay si toos ah ula wareegi doonto ciidamadda Kumaandooska ee ay tababaraan Imaaraadka Carabtu.
Wasiirku wuxuu intaas ku daray in ciidamadaas ay dowladda Soomaaliya siin doonto mushaharkooda wixii xiligan ka danbeeya, wuxuuna sabab uga dhigay in la gaaray wakhtigii uu ku ekaa mushaharka ay Imaaraadku siin jireen ciidamadda ay tababaraan.
Wuxuu si cad ugu celceliyey Wasiirku in ciidamadda Imaaraadku ay tababarka siiyaan ay ka mid yihiin ciidamadda dowladda soomaaliya ayna la wareegi doonaan xuska maalinta aasaaska ciidanka Soomaaliya oo ku began 12 April 2018.
Wuxuu kaloo sheegay in ciidamadaas ay ka saaran tahay masuuliyad dowladda Soomaaliya ayna damaanad qaadayaan xuquuqda ay leeyihiin sida mushaharkooda, darajadooda iyo daryeelkooda.
Wasiirku wuxuu u mahad celin u soo jeediyey dowladda Imaaraadka Carabta oo uu ku amaanay kaalintii ay ka geysteen tababarka ciidamada Soomaalida iyo weliba dhaqaalihii ay ku bixiyeen.
Madaxweynaha Turkiga oo wasiir u magacaabay wiilka uu soddoga u yahay
Q.Midoobay oo kun Askari ka dhimeysa ciidamada AMISOM ee Soomaaliya